15 Responses to “ငါးဥချဉ်ချဉ်စပ်စပ်ချက်”
မချောရေ ရန်ကုန်မှာ မိုးကစွေလွန်းတော. မိုးအေးအေးနဲ. ဒီဟင်းစပ်လေးတွေနဲ.သိပ်လိုက်မှာပဲ။ မချောတုို.ဆီမှာရော မိုးတွင်းပဲလားဟင်။
ငါးဥဆို အရမ်းကြိုက်ဗျာ ... ။ အခုလိုလေး တော့ ချက်စားအုံးမှပဲ .... ။
ငါးဥလည်း ချဉ်ချဉ်စပ်စပ် ဆိုကြိုက်တယ်။
ထမင်းဖြူလေးနဲ့ စားလိုက်ရရင် စားကောင်းလိုက်မယ့်ဖြစ်ခြင်း။
(မချောရေ ဟိုရှုပ်ဒီရှုပ်နဲ့ ဘလောဂ့်လည်းမလည်အားလို့။ စာတွေလည်း မဖတ်နိုင်ဘူး)
ဗိုက်တောင်ဆာသွားပြီ မချောရေ၊၊ မကျည်းသီးနုနုက ဒီဒေသမှာ ဘယ်နားသွားရှာရမှန်းလဲ မသိဘူး၊၊ ပုံတွေကြည့်ပြီး တံတွေးတွေ ဂလုသွားတယ်နော် :)
ငါးဥဆိုရင်ကြော်ရင်ကြော် ကြော်ချက်လေးချက်ရင်ချက် အဲဒီနှစ်မျိုးပဲတတ်တယ်။ အခုတော့ ချောရဲ့ ဟင်းချက်နည်းလေးယူသွားပြီ စမ်းချက်ကြည့်မယ်း)
အို.. စားချင်လိုက်တာကွယ် ..
၂ ခု လုံး အရမ်း ကြိုက် ..း))
ငါအူ၊ ငါးစီဖောင်းဟင်းကို ဧရာဝတီတိုင်း၊ အိမ်မဲမြို့ကို သွားတုန်းက စားဖူးခဲ့သလိုပဲ။ အဲဒီအိမ်က ဘာကပ်လဲဆိုတော့ ဟင်းက လေးခွက်လား မသိဘူး။ စားဖူးအောင်လို့ ကပ်တာတဲ့လေ။ ငါးတွေချည်းပဲ...ငါးဟင်းချိုတွေရော...ဘာတွေရော...နာမည်မသိဘူး...ဟိ
မချောရေ- စားချင်လိုက်တာ လွန်ပါရော... အရမ်းမွှေးပြီးစားကောင်းမှာ....
စားချင်စရာကြီးမချောရေ။ အိမ်မှာ ငါးဥတွေရှိနေတယ် ချက်ကြည့်ရဦးမယ်